Somaliland: Dacwado Khatar Ku Ah Xoriyadda Hadalka | Human Rights Watch
May 9, 2018 7:00AM EDT
Naciima Axmad Ibraahim, oo ah abwaanad caan ah ayaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay u ololeeysay midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Naciima ayaa cafis madaxweyne lagu sii daayay 7-dii Mey ka dib markii ay xirneyd in ka badan saddex bilood. © Private
(Nairobi) – Dembi ku oogidda ay Somaliland dhawaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arimaha xasaasiga ah ayaa khatar weyn ku ah xoriyadda hadalka, sida ay maanta sheegtay hay'adda Human Rights Watch. Waxaa ugu dambeeyay dacwad lagu oogay oday dhaqameed caan ah kaasoo 26-kii Abriil 2018 lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah, ka dib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad.
Dowladda Somaliland ayaa bishii lasoo dhaafay dacwad kusoo oogtay saddex qof, ayadoo adeegsanaysa qodobo aan caddeyn oo xakameeya xoriyadda hadalka. Shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dembi laga dhigo ka horimaanshaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleeceynta ama aflagaadeynta mas'uuliyiinta dowladda.
"Waxaa sii yaraanaya fursadda ay shacabka ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda Somaliland u wajahayso arimaha la isku khilaafsan yahay, maadaama ay dowladda dacwad dembiyeed ku aamusiso dadka dhaliilsan," ayay tiri Laetitia Bader oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika. Waxay intaa ku dartay "Jawaabta adag ee ay dowladda ka bixinayso arintan ayaa dharbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha, waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda."
Somaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse weli ma aanay helin aqoonsi caalami ah. Waxa ay soohdin la leedahay maamulka Puntland. Tan iyo bishii Janaayo, waxa ay xiisad colaadeed ka taagneyd deegaan ka tirsan gobolka Sool oo ay isku hayaan Somaliland iyo Puntland. Iska horimaad ka dhacay Tukaraq ayaa keenay in ciidamada Somaliland ay deegaankaasi kala wareegaan kuwa Puntland.
19-kii Abriil, booliska Somaliland ayaa xiray Boqor Cismaan Aw-Maxamuud oo ku magac dheer "Buur Madow" ka dib markii uu ku baaqay in Somaliland iyo Puntland ay kala qaadaan ciidamada isku hor fadhiya Sool, xilli uu ka qeybgalayay caleemasaar madax dhaqameed oo ka dhacayay Puntland. Xeer ilaaliyaha Somaliland ayaa 26-kii Abriil ku eedeeyay Boqor Buur Madow inuu jeediyay hadallo dhaawac ku ah madax bannaanida Somaliland iyo faafinta warar been abuur ah. Isla maalintaasi ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah. Dhagaysiga racfaankiisa ayaa loo asteeyay 8-da Mey, balse dib ayaa loo dhigay.